कथाकार महेश पौड्यालको कथा : पानीमुनिको जून – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
५ आश्विन २०७७, सोमबार १२:०६ English
कथाकार महेश पौड्यालको कथा : पानीमुनिको जून
आज बुद्धपूर्णिमा । हरेक वर्षझैँ विजय हिँड्यो बुद्धको मन्दिर वरिपरिको सन्ध्याकालिन रौनक हेर्न । उसलाई धार्मिक आस्थाभन्दा पनि त्यहाँको रमणीयतामा चासो थियो । स्वर्णिम मन्दिर, चारैतिर फूलको महक, आउने–जानेहरूको घुँइँचो, र मन्दिर छेउको तलाउ ! त्यो तलाउ, जसको वरिपरि डिलैडिल मार्वल जडान गरिएको थियो । त्यस मार्वलमा चन्द्रमा हजारौ चन्द्रमाहरूमा बाँडिएर छरिएको रात र ती चन्द्रमाहरूसँगै खेलिरहेका पानीका असङ्ख्य तरङ्गहरू । वास्तवमा त्यो चन्द्रमाहरूको रात थियो ।
पानीमुनिको पूर्ण चन्द्रमा, मोनालिसा । छोटा–छोटा अन्तरालमा बग्ने दुष्ट पापी दुशासनजस्तो चीसो बतास, चन्द्रमाको चीरहरण गर्न तल्लिन हुँदा ऊ जल तरङ्गहरूमा असङ्ख्य द्रौपदीहरू भएर छरिन्थी ।
सङ्गमरमरको लक्ष्मणरेखा नाघ्न नसकी थकित भएको दुष्ट बतास डिलमा ठोक्किएर करुण क्रन्दन् सुनाइरहेको हुन्थ्यो । पूर्ण कमलहरूले सुशोभित त्यस सजल सिंहासनमा चन्द्रमा, र वरिपरि उसको आलोकलाई हेरेर कविता र गीत भर्नेहरूको ताँती । त्यहाँ रात र दिन बीचको पर्खाल देखिदैनथ्यो, सृष्टि दिग्भ्रमित भएजस्तो, आकाश पृथ्वी भएजस्तो, पृथ्वी आकाश भएजस्तो ।
पूजा गर्नेहरू त्यस तलाउमा हातगोडा धुन्थे, सफा हुन्थे र मन्दिर प्रवेश गर्थे । त्यहाँको शान्ति, विचारको पवित्रता, अहिंसाप्रतिको प्रविबद्धता देख्दा प्रश्न उठ्थ्यो: साँच्चै यही मुलुक हो त जहाँ बाह्रवर्ष लामो हिंसक, सशस्त्र युद्ध भयो, जहाँ बर्माले छेडेर मान्छे मारिए, जहाँ बनचरोले काटिएका टाउकाहरू भीरबाट लडाइए र तीमध्ये एउटा टाउको तल गएर बाझको ठुटोमा अड्किएपछि बाह्रबर्षे छोरोले गएर “बुवा” भन्दै आफ्नो मृत बावुको टाउको उठायो ? पत्यार लाग्दैन, यो त्यही शान्ति क्षेत्र हो, जहाँ मलामी गएका मान्छेहरू घाटमै मारिए, र जल्दो चितामा फालिए ; यो त्यही देश हो जहाँ आफैँलाई खाडल खन्न लगाई त्यसै खाडलमा पुरेर मान्छे मारिए । यस्तो शान्त देशमा, यस्तो निर्दाेष प्रकृतिमा, यस स्वर्गमा कसरी हिंसाका आँकुरा पलाउन सके होलान् ?
यसैले विजय यहाँ आउँथ्यो, हरेक बुद्धपूर्णिमाको रात, एक्लै । ऊ काठमाडौं आएको पाँचवर्ष भयो र आज ऊ यस मन्दिरमा आएको पाँचौँ पटक हो । सधैँझैं उसले आज पनि बाहिरबाटै मन्दिरको परिक्रमा ग¥यो र मनमनै भन्यो, “फेरि एउटा बुद्ध जन्मे हुन्थ्यो ।” उसले सोच्यो, “अब फेरि बुद्ध जन्मियो भने निर्यातित् नहोस्, नबिदेशियोस्, आफ्नै जन्मभूमिमा अवहेलित भएर ।”
विडम्बनै त हो नि, हामी धेरैलाई लुम्बिनीको बारेमा थाहा छैन । हामीलाई हाम्रै आफ्ना बुद्धको बारेमा जानकारी दिन चीन, तिब्बत, कम्बोडिया, जापान, थाइलैण्ड लगायतका देशहरूबाट भिक्षुहरू आउँछन् । केश मुण्डन गरेका, माला भिरेका, गेरुवा बस्त्रले सडकै रातो पारेर हिड्छन हाम्रै देशमा विदेशी भिक्षुहरू, अनि हामीलाई शान्तिको पाठ पढाउँछन । हामीलाई उनीहरूका कुरा सुन्ने फुर्सद पनि छैन: अफिस जानु छ, अड्डा जानु छ, आन्दोलनमा जानु छ, टायरको इन्तजाम गर्नु छ, क्रान्ति गर्नु छ । हामीलाई गीत गाउन पाए पुग्छ, “बद्धले शान्ति ल्याएको देश…” एउटा बुद्धलाई हामीले निर्यात ग¥यौँ, अर्को बुद्ध जन्मेछ भने त्यसलाई हामी आफ्नै देशमा युग–यु्गसम्म बाँच्न दिऔं, गीतमा हैन, व्यवहारमा ।
विजयले तलाउको डिलमा उभिएर हे¥यो, सँधै झै अटल थियो पानीमुनिको चन्द्रमा– निर्भीक, हर्षविभोर, कति सुन्दर! सुन्दरता स्वीजरलैण्डको प्याटेन्ट आविष्कार हैन, सुन्दरता हिम्माछाद्दित पर्वतहरूको पेवा हैन, सुन्दरता बेहुली हुनेहरूको श्रृङ्गारमात्र पनि हैन, सुन्दरता विश्वसुन्दरीको अर्धनग्न शरीर पनि हैन, जसमा रातारात करोडौंको व्यापार विनिमय हुन्छ । सुन्दरता आनन्दित मनहरूको शान्त भाषा हो; यो मान्छे र प्रकृतिको प्रेमालाप हो ।
यसै गरी प्रश्नै–प्रश्नहरूबीच तेस्रो वर्ष पनि बित्यो । चौथो वर्ष पनि त्यो आइमार्ई त्यहीँ थिई । विजयले अलि नजीक गएर हेर्यो उसलाई । ऊ नजीक जाँदा त्यस आइमार्ईले असजिलो महसूस गरेको कुरा थाहा पाएर ऊ पछि हट्यो । गलाभरी आएका प्रश्नहरू घुटुक्क निल्दै घर फर्कियो, मध्य रातमा ।
साँझ प¥यो, जून झुल्किए । विजय हिड्यो मन्दिरतिर, एक्लै । आज उसलाई अरू सुन्दरतातिर चासो भएन; ऊ सीधै ममताको छेउमा पुगेर उभियो । ममता त्यहीँ थिई– बीभत्स रुप, फाटेका लुगा, झङ्रङ्ग फैलिएको लट्टे कपाल, काँपिरहेका ओठहरू, पानीमुनिको जूनमा केन्द्रित अटल आँखाहरू । ती आँखामा एउटा अटल विश्वास देखिन्थ्यो, अद्वितीय धैर्यता ।
विजयले यताउति हे¥यो, कोही थिएनन् । उसको स्कुलका साथी र विद्यार्थीहरूको छायाँसम्म देखिएन । ऊ ढुक्क भयो ।
ममता त्यहीँ थिई, शान्त, तपस्यारत भिक्षु जस्तै । अब विजयले साहस ग¥यो, नजिक जाने, सोध्ने । ममता आफ्नै ध्यानमा मस्त थिई, तल पानीमा हाँसिरहेको जूनसँग साक्षात्कार गर्दै । उसलाई के मतलब, छेउछाउ को आयो, को गयो ?
उसले मन बाँध्यो, साहस ग¥यो, केही अघि बढ्यो र बोल्यो, “दिदी, किन यसरी….”
१० श्रावण २०७७, शनिबार ०२:०६ मा प्रकाशित